Izindaba - Yiziphi izingxenye eziyinhloko zomoya ophephela
I-Nacelle: I-nacelle iqukethe okokusebenza okuyisihluthulelo komoya ophephela, kufaka phakathi amabhokisi wamagiya nama-generator. Abasebenzi besondlo bangangena ku-nacelle ngombhoshongo womoya ophephela. Isiphetho sangakwesokunxele se-nacelle yi-Rotor ye-generator yomoya, okungukuthi ama-rotor blades kanye ne-shaft.
Ama-Rotor blades: bamba umoya bese uwudlulisela ku-axis rotor. Kumshini ophefumulayo womoya wamanje ongamakhilomitha angama-600, ubude obulinganisiwe bensimbi ngayinye bucishe bube ngamamitha angama-20, futhi yakhelwe ukufana namaphiko endiza.
I-eksisi: I-rotor axis inamathiselwe kushaft enejubane eliphansi le-turbine yomoya.
Shaft enejubane eliphansi: Umphini wesivinini esiphansi womoya ophephela emoyeni uxhuma i-rotor shaft ku-gearbox. Kumshini ophefumulayo womoya wamanje wama-kilowatt angama-600, isivinini se-rotor sihamba kancane, cishe kube ngu-19 kuye kwangama-30 ngezinguquko ngomzuzu. Kukhona amapayipi wesistimu ye-hydraulic ku-shaft ukukhuthaza ukusebenza kwe-brake ye-aerodynamic.
Ibhokisi legiya: Ohlangothini lwesobunxele luka-gearbox kukhona ishaft enejubane eliphansi, elingakhuphula ijubane le-shaft enejubane liye kuma-50 kunelika-shaft elinejubane eliphansi.
I-shaft enejubane eliphezulu kanye ne-brake yayo eyenziwe ngomshini: I-shaft enejubane elikhulu igijima ngezinguquko eziyi-1500 ngomzuzu bese ishayela i-generator. Ifakwe i-brake ephuthumayo yemishini, esetshenziswa lapho ibhuleki le-aerodynamic lihluleka noma lapho kulungiswa i-turbine yomoya.
I-Generator: Imvamisa ibizwa ngokuthi i-induction motor noma i-asynchronous generator. Kumishini yomoya yesimanje, ukukhishwa kwamandla okuphezulu kuvame ukuba ngama-kilowatts angama-500 kuye kwangama-1500.
Idivayisi ye-Yaw: Zungezisa i-nacelle ngosizo lwenjini kagesi ukuze i-rotor ibheke umoya. Umshini we-yaw usebenza ngesilawuli se-elekthronikhi, esingaqonda ukuqondiswa ngumoya nge-vane vane. Isithombe sikhombisa i-turbine yomoya izamula. Ngokuvamile, lapho umoya ushintsha lapho ubheke khona, i-turbine yomoya izophambukisa kuphela ama-degree ambalwa ngasikhathi.
Isilawuli se-elekthronikhi: Kuqukethe ikhompiyutha ehlola njalo isimo somoya ophendulayo iphinde ilawule idivayisi ye-yaw. Ukuze uvikele noma ikuphi ukwehluleka (okungukuthi, ukushisa ngokweqile kwebhokisi likamagiya noma i-generator), isilawuli singamisa ngokuzenzakalela ukuzungeza kwomoya ophendulayo bese sishayela opharetha womoya ophendulayo ngemodemu yocingo.
Uhlelo lwe-Hydraulic: lusetshenziselwa ukusetha kabusha ukubopha kwe-aerodynamic kwe-turbine yomoya.
Into yokupholisa: Iqukethe isithandwa sokupholisa ugesi. Ngaphezu kwalokho, iqukethe into yokupholisa uwoyela yokupholisa uwoyela ku-gearbox. Amanye ama-turbine omoya anama-generator apholisa amanzi.
Umbhoshongo: Umbhoshongo ophendulwa ngumoya uqukethe i-nacelle ne-rotor. Imvamisa imibhoshongo emide inenzuzo ngoba uma iphakama ibanga ukusuka emhlabathini, ijubane lomoya liphakama. Ukuphakama kombhoshongo we-turbine yomoya yesimanje engama-kilowatt angama-40 kungamamitha angama-40 kuye kwangama-60. Kungaba umbhoshongo we-tubular noma umbhoshongo we-lattice. Umbhoshongo we-tubular uphephe kakhulu kubasebenzi besondlo ngoba bangafinyelela phezulu kombhoshongo ngesitebhisi sangaphakathi. Ubuhle bombhoshongo we-lattice ukuthi ushibhile.
I-Anemometer ne-vane vane: kusetshenziselwa ukukala isivinini somoya nokuqondisa
I-Rudder: I-turbine encane yomoya (ngokuvamile eyi-10KW nangaphansi) evame ukutholakala esiqondisweni somoya ku-eksisi evundlile. Itholakala ngemuva komzimba ojikelezayo futhi ixhunywe nomzimba ojikelezayo. Umsebenzi omkhulu ukulungisa ukuqondiswa kwefeni ukuze umlandeli abhekane nesiqondiso somoya. Umsebenzi wesibili ukwenza ikhanda le-turbine lomoya lichezuke esiqondisweni somoya ngaphansi kwezimo ezinamandla zomoya, ukunciphisa ijubane nokuvikela i-turbine yomoya.